Aza miafina amin'ny mpanjifanao intsony
Alatsinainy, Septambra 13, 2010 Alahady Oktobra 4, 2015 Michael Reynolds
Mbola manaitra ahy ihany ny isan'ny orinasa manafina amin'ny mpanjifany. Nanao fikarohana aho tamin'ny herinandro lasa teo tamin'ny mpamorona fampiharana iPhone satria manana mpanjifa mila fampiasa iPhone aho. Nanontany olona sasany tao amin'ny Twitter aho. Douglas Karr nanome ahy referraly vitsivitsy ary nahafantatra referansa iray ihany koa aho tamin'ny resadresaka nifanaovana tamina namana iray hafa. Nandeha tamin'ireo tranokalan'ny orinasa telo samy hafa aho ary sosotra avy hatrany.
Ny orinasa tsirairay dia farafaharatsiny mba nanana tranokala fa izy ireo rehetra kosa manjavozavo, tsy mahalana, mankaleo, na ireo voalaza etsy ambony ireo. Tsy nilaza mazava akory aza izy ireo hoe "manao app iPhone izahay" ary tsy naneho sanganasa na pikantsary teo aloha.
Vao mainka niharatsy izany rehefa nandeha tany amin'ny pejin'izy ireo aho. Tsy nahita nomeraon-telefaona iray, adiresy aho, na indraindray aza adiresy mailaka. Ny ankamaroany dia nanana endrika fifandraisana tsotra fotsiny.
Na dia nameno ny taratasim-pifandraisana aza aho dia somary natahotra ihany. Ireto orinasa ara-dalàna ireto? Azoko atokisana ve izy ireo amin'ny volan'ny mpanjifako? Hanao asa tsara ve izy ireo? Te hanana olona eo an-toerana ny mpanjifako - any Indianapolis aza no misy azy ireo?
Ny mpanjifako dia orinasa mpanamboatra dolara an-tapitrisany ary mila afaka miresaka azy ireo amina olona matoky tena aho. Hatreto dia tsy azoko antoka hoe nahita orinasa marina aho.
Avy eo, nahazo referansa hafa tao amin'ny Twitter aho Paula Henry. Nanoro ahy orinasa iray izy. Rehefa nandeha tany amin'ny tranonkalan'ny orinasa aho dia namidy. Izao no antony:
Nanana a tranokala tsara tarehy izay mahatonga azy ireo ho toy ny orinasa tena izy
Naneho tena izy ireo sary nalaina tamin'ny asa teo aloha
izy ireo milaza mazava ny zavatra ataon'izy ireo: "Mampivelatra fampiharana iPhone izahay"
Izy ireo dia mavitrika ao amin'ny Twitter ary asehoy ao amin'ny tranonkala ny resadresaka Twitter (hitako izy ireo hiresaka amin'izy ireo)
Ny pejin'izy ireo dia manana adiresy mailaka, adiresy ara-batana, ary nomeraon-telefaona
Raha fintinina dia nanamora ny fitokisako azy ireo ny orinasa. Niantso aho ary namela mailaka am-peo ary niantso antso afaka adiny iray aho. Nametraka fanontaniana vitsivitsy aho ary nahafantatra bebe kokoa momba ny asany teo aloha. Izaho izao dia hiara-miasa amin'izy ireo hamolavola fampiharana iPhone ho an'ny mpanjifako.
Ny sary asehonao amin'ny Internet, ny hafatra ampitanao ary ny fanamorana fifandraisana aminao dia misy fiovana lehibe amin'ny mpanjifanao. Ataovy mora ny manao orinasa.
Tags: fifandraisanalaharana fifandraisanafifandraisana pejymiafinapaula henry